Baarlamaanka Hirshabelle oo ansixiyay in dib-u-eegis lagu sameyn doono xilka masuulkii u hoggaansami waayo u yeerida Baarlamaanka – Kalfadhi
January 2, 2021 Hassan Istiila
Xildhibaannada Baarlamanka Dowlad Goboledka Hirshabelle oo maanta yeeshay kulankooda 13-aad ee kalfadhiga 1-aad ayaa ansixiyay qodob dastuuri ah oo kamid ah isla xisaabtanka xukuumadda.
Ku-simaha Guddoomiyaha Baarlamanka ahna Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad Mudane Siraaji Sheikh Isxaaq, ayaa shir-guddoominayay fadhiga oo ajandihiisa guud uu ahaa dhammeystirka dooda dib-u-eegista dastuurka Dowlad Goboledka Hirshabelle.
Xildhibaannada Baarlamanka oo tixraacaya soo-jeedinta iyo warbixinta Guddiga Dastuurka ayaa dood kayeeshay ilaa 5 qodob oo dib-u-eegistooda la hor keenay fadhiga Baarlamanka.
Xildhibaannada ayaa ugu dambeyn cod gacan taag ah ku ansixiyey qodob kamid ah qodobadii ay ka doodayeen oo ahaa in masuulkii u hoggaansami waayo u yeerida Baarlamaanka ay xildhibaannada xilkiisa ku sameyn doonaan dib-u-eegis.
Ku-simaha Guddoomiyaha ahna Guddoomiye ku-xigeenka 1-aad Mudane Siraaji Sheikh Isxaaq, oo ku dhawaaqay natiijadda codeynta ayaa sheegay in codeyeen 60 xildhibaan, waxaana oggolaayay 53 Mudane, 4 xildhibaan ayaa diiday halka saddex mudanana ay ka aamuseen.
Guddoonka Baarlamaanka oo ka qeyb-galay kulan qado ah oo loo sameeyay madaxdii ka qeyb-gashay madasha machadka Heritage